ရနျကုနျမွို့ပတျရထားလမျး အခြိနျစာရငျးပွောငျးလဲပွေးဆှဲမယျ – Voice of Myanmar
ရနျကုနျမွို့ပတျရထားလမျးပိုငျးကို အဆငျ့မွှငျ့တငျပွုပွငျတာတှေ ဆောငျရှကျနတေဲ့အတှကျ ပွေးဆှဲနတေဲ့အခြိနျစာရငျးကို ဖဖေျောဝါရီ ၈ရကျနကေ့စပွီး ပွောငျးလဲပွေးဆှဲသှားမယျလို့ မွနျမာ့မီးရထားကနေ သိရပါတယျ။
အခုလကျရှိ ရနျကုနျမွို့ပတျရထားလမျး ပွုပွငျတာမှာ ရကေူး – ပုဇှနျတောငျ နှဈလမျးသှားရှိတဲ့အနကျ အပွငျလမျး(Outer Line)ကို လမျးပိုငျးပိတျပွီး လမျးပွုပွငျဆောငျရှကျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ မွို့ပတျရထားအခြိနျစာရငျး ပွငျဆငျပွောငျးလဲပွေးဆှဲမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
“အဓိကတော့ ၈ရကျနကေ့ စပွီးတော့ မွို့ပတျရထားတှရေဲ့ အခြိနျဇယားကို ပွောငျးလဲပွေးဆှဲမှာဖွဈပါတယျ။. လကျရှိမွို့ပတျရထားကတော့ ၁၈၃စီး ပွေးဆှဲနတောဖွဈပါတယျ။ အခြိနျစာရငျးပွောငျးရငျ အဲ့ထကျတော့ နညျးနညျးလြော့သှားမယျ။ အရငျတုနျးက လမျးပိုငျးတှပေိတျထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ အတိုလေးတှကေ မြားတာပေါ့။ အခေါကျရေ ပိုမြားတယျ။ အခုကတော့ မွို့တဈပတျလုံးကို ပတျတဲ့စနဈတှကေလညျး အခုဒီထဲမှာ ပွနျပါလာတယျ။ လကျဝဲလကျယာ တဈပတျလုံးပတျတဲ့ စနဈပေါ့။ အဲဒါကွောငျ့ ခရီးစငျးရကေ ပိုလြော့သှားတယျ။ ခရီးကွာခြိနျကတော့ အရငျအတိုငျးပါပဲ မပွောငျးသေးပါဘူး”လို့မွနျမာ့မီးရထား၊ သှားလားရေး ရနျကုနျတိုငျးမနျနဂြော ဦးဇျောလှငျကပွောပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့ပတျရထားလမျးအခြိနျတှေ ပွငျဆငျသတျမှတျတဲ့ လကျရှိကာလအခြိနျမှာ မွို့ပတျရထားလမျးပိုငျးကို ၁၈၃ခေါကျ၊ ပွငျဆငျမဲ့ကာလမှာ ၁၆၈ခေါကျပွေးဆှဲပေးမှာဖွဈပွီးတော့ ရုံးခြိနျရထားပွေးဆှဲပေးမဲ့ အခွအေနမှော နံနကျပိုငျးကို အဝငျ ၁၂စငျးနဲ့ ညနပေိုငျးအထှကျ၁၄စငျး ပွေးဆှဲပေးမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့ပတျရထားလမျး ပွုပွငျမူမှာ အတှငျးလမျး၊အပွငျလမျး အစုနျလမျး၊အဆနျလမျးရှိပွီးတော့ လမျးတဈလမျးပိတျ ၊ လမျးတဈလမျးဖှငျ့စနဈနဲ့ ပွုပွငျနတောဖွဈပါတယျ။
“အခြိနျတှကေတော့ လမျးပိုငျးတဈခုကို လုပျတဲ့ ကနျြတဲ့လမျးပိုငျးနဲ့ ရထားပွေးဆှဲတာပေါ့။ အခုပိတျထားတဲ့ လမျးပိုငျးက ပွနျဖှငျ့ပွီးတော့ နောကျထပျလမျးပိုငျးကို ခြိနျးလိုကျတာပေါ့။ ခြိနျးလိုကျတဲ့အခါ အခြိနျစာရငျးတှေ အသဈပွနျပွီးတော့ ရေးဆှဲရတယျ။ မူလအခြိနျစာရငျးနဲ့ တဈထပျထဲမကတြော့ဘူ။ ၈နာရီ ရနျကုနျဘူတာကွီးက ထှကျရမယျဆိုတဲ့ ရထားက ၈နာရီဟုတျခငျြမှဟုတျမယျ။ ၈နာရီ ၅မိနဈဖွဈခငျြဖွဈမယျ။ ၇နာရီ ၅၀ဖွဈရငျဖွဈမယျ။ တဈထပျထဲမကတြဲ့အတှကျ အခြိနျလေးက နညျးနညျးလေးရှပွေီ့း ခြိနျးသှားတာဖွဈတဲ့ အခြိနျစာရငျးပွောငျးလဲ ပွေးဆှဲတာဖွဈပါတယျ”လို့ ဦးဇျောလှငျက ဆကျပွီးတော့ပွောပါတယျ။
အခြိနျစာရငျးပွောငျးတာနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ သကျဆိုငျရာဘူတာအသီးသီးမှာ အသေးစိတျ ဗီနိုငျးတှနေဲ့ ကွညောပေးမှာဖွဈပွီးတော့ အဓိက မနကျပိုငျးရုံးခြိနျရထားနဲ့ ညနပေိုငျးရုံးခြိနျရထားတှကေို ခရီးသှားလာမူ အမြားဆုံး အခြိနျတှမှော ခရီးသှားလာမူ မထိခိုကျအောငျ စီစဉျပေးထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
“ အခုလကျရှိ ရထားအခြိနျစာရငျးကတော့ အဆငျပွတေယျ။ ပွောငျးလဲလာမယျ့ အခြိနျစာရငျးကတော့ မသိသေးတော့ပွောလို့မရဘူး။ ခုလမျးတှေ ပွငျနတေဲ့အခြိနျမှာ ရုံးဆငျး၊ရုံးတကျမှာ ရထားတှကေတော့ ပုံမှနျပဲဆိုတော့ အဆငျပွပေါတယျ။ ကနျြတဲ့အခြိနျတှကေတော့ ရထားလမျးပွငျနတောတှရှေိတော့ တဈလမျးထဲမောငျးရတဲ့အခါကတြော့ ရထားအခြိနျထကျနညျးနညျးနောကျကတြော့ရှိတယျ။ ရုံးဆငျးရုံးတကျခြိနျကတော့ တျောတျောမြားမြား ရထားအခြိနျမှနျပါတယျ။ ရုံးဆငျးရုံးတကျမဟုတျတဲ့ အခြိနျလောကျပဲ နညျးနညျးနောကျကတြာရှိတယျ”လို့ ရနျကုနျမွို့ပတျရထားနဲ့ နစေ့ဉျအလုပျသှားနတေဲ့ ကွညျ့မွငျတိုငျမွို့နယျနေ ကိုမငျးမငျးသူကပွောပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့ပတျ အနောကျခွမျးပွုပွငျမူဟာ အခုလကျရှိ ၈၀ရာခိုငျနှုနျးလောကျကိုပွီးနပွေီး အရှခွေ့မျးပွုပွငျမူကတော့ ရာခိုငျနှုနျးအားနဲ့ တဈဝကျခနျ့ပွီးစီးပွီဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
ရထားလမျးပိုငျးပွငျဆငျမူအားလုံးကို ၂၀၂၀ ဇူလိုငျမှာ ပွီးမယျလို့ လြာထားပွီး မွို့ပတျရထား စီမံကိနျးတဈခုလုံး အဆငျ့မွှငျ့တငျမူကိုတော့ ၂၀၂၁-၂၀၂၂မှ ပွီးမယျလို့ လြာထားတာဖွဈပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့ပတျ အဆငျ့မွှငျ့တငျမူ စီမံကိနျးတဈခုလုံးပွီးသှားရငျလညျး မွို့ပတျရထားလမျးပိုငျးအခြိနျတှကေို ပွနျလညျပွောငျးလဲကာ ပွေးဆှဲသှားမှာဖွဈမယျလို့ သိရပါတယျ။
#VOM #voiceofmyanmar #ရနျကုနျ #မွို့ပတျရထား #အခြိနျပွောငျးလဲပွေးဆှဲ
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းပိုင်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်တာတွေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက် ပြေးဆွဲနေတဲ့အချိန်စာရင်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၈ရက်နေ့ကစပြီး ပြောင်းလဲပြေးဆွဲသွားမယ်လို့ မြန်မာ့မီးရထားကနေ သိရပါတယ်။
အခုလက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း ပြုပြင်တာမှာ ရေကူး – ပုဇွန်တောင် နှစ်လမ်းသွားရှိတဲ့အနက် အပြင်လမ်း(Outer Line)ကို လမ်းပိုင်းပိတ်ပြီး လမ်းပြုပြင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မြို့ပတ်ရထားအချိန်စာရင်း ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“အဓိကတော့ ၈ရက်နေ့က စပြီးတော့ မြို့ပတ်ရထားတွေရဲ့ အချိန်ဇယားကို ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။. လက်ရှိမြို့ပတ်ရထားကတော့ ၁၈၃စီး ပြေးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်စာရင်းပြောင်းရင် အဲ့ထက်တော့ နည်းနည်းလျော့သွားမယ်။ အရင်တုန်းက လမ်းပိုင်းတွေပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အတိုလေးတွေက များတာပေါ့။ အခေါက်ရေ ပိုများတယ်။ အခုကတော့ မြို့တစ်ပတ်လုံးကို ပတ်တဲ့စနစ်တွေကလည်း အခုဒီထဲမှာ ပြန်ပါလာတယ်။ လက်ဝဲလက်ယာ တစ်ပတ်လုံးပတ်တဲ့ စနစ်ပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ခရီးစင်းရေက ပိုလျော့သွားတယ်။ ခရီးကြာချိန်ကတော့ အရင်အတိုင်းပါပဲ မပြောင်းသေးပါဘူး”လို့မြန်မာ့မီးရထား၊ သွားလားရေး ရန်ကုန်တိုင်းမန်နေဂျာ ဦးဇော်လွင်ကပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းအချိန်တွေ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်တဲ့ လက်ရှိကာလအချိန်မှာ မြို့ပတ်ရထားလမ်းပိုင်းကို ၁၈၃ခေါက်၊ ပြင်ဆင်မဲ့ကာလမှာ ၁၆၈ခေါက်ပြေးဆွဲပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ ရုံးချိန်ရထားပြေးဆွဲပေးမဲ့ အခြေအနေမှာ နံနက်ပိုင်းကို အဝင် ၁၂စင်းနဲ့ ညနေပိုင်းအထွက်၁၄စင်း ပြေးဆွဲပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း ပြုပြင်မူမှာ အတွင်းလမ်း၊အပြင်လမ်း အစုန်လမ်း၊အဆန်လမ်းရှိပြီးတော့ လမ်းတစ်လမ်းပိတ် ၊ လမ်းတစ်လမ်းဖွင့်စနစ်နဲ့ ပြုပြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
“အချိန်တွေကတော့ လမ်းပိုင်းတစ်ခုကို လုပ်တဲ့ ကျန်တဲ့လမ်းပိုင်းနဲ့ ရထားပြေးဆွဲတာပေါ့။ အခုပိတ်ထားတဲ့ လမ်းပိုင်းက ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ နောက်ထပ်လမ်းပိုင်းကို ချိန်းလိုက်တာပေါ့။ ချိန်းလိုက်တဲ့အခါ အချိန်စာရင်းတွေ အသစ်ပြန်ပြီးတော့ ရေးဆွဲရတယ်။ မူလအချိန်စာရင်းနဲ့ တစ်ထပ်ထဲမကျတော့ဘူ။ ၈နာရီ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးက ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရထားက ၈နာရီဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ ၈နာရီ ၅မိနစ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ၇နာရီ ၅၀ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ တစ်ထပ်ထဲမကျတဲ့အတွက် အချိန်လေးက နည်းနည်းလေးရွေ့ပြီး ချိန်းသွားတာဖြစ်တဲ့ အချိန်စာရင်းပြောင်းလဲ ပြေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်”လို့ ဦးဇော်လွင်က ဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။
အချိန်စာရင်းပြောင်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာဘူတာအသီးသီးမှာ အသေးစိတ် ဗီနိုင်းတွေနဲ့ ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ အဓိက မနက်ပိုင်းရုံးချိန်ရထားနဲ့ ညနေပိုင်းရုံးချိန်ရထားတွေကို ခရီးသွားလာမူ အများဆုံး အချိန်တွေမှာ ခရီးသွားလာမူ မထိခိုက်အောင် စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ အခုလက်ရှိ ရထားအချိန်စာရင်းကတော့ အဆင်ပြေတယ်။ ပြောင်းလဲလာမယ့် အချိန်စာရင်းကတော့ မသိသေးတော့ပြောလို့မရဘူး။ ခုလမ်းတွေ ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာ ရုံးဆင်း၊ရုံးတက်မှာ ရထားတွေကတော့ ပုံမှန်ပဲဆိုတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေကတော့ ရထားလမ်းပြင်နေတာတွေရှိတော့ တစ်လမ်းထဲမောင်းရတဲ့အခါကျတော့ ရထားအချိန်ထက်နည်းနည်းနောက်ကျတော့ရှိတယ်။ ရုံးဆင်းရုံးတက်ချိန်ကတော့ တော်တော်များများ ရထားအချိန်မှန်ပါတယ်။ ရုံးဆင်းရုံးတက်မဟုတ်တဲ့ အချိန်လောက်ပဲ နည်းနည်းနောက်ကျတာရှိတယ်”လို့ ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားနဲ့ နေ့စဉ်အလုပ်သွားနေတဲ့ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်နေ ကိုမင်းမင်းသူကပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ပတ် အနောက်ခြမ်းပြုပြင်မူဟာ အခုလက်ရှိ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပြီးနေပြီး အရှေ့ခြမ်းပြုပြင်မူကတော့ ရာခိုင်နှုန်းအားနဲ့ တစ်ဝက်ခန့်ပြီးစီးပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရထားလမ်းပိုင်းပြင်ဆင်မူအားလုံးကို ၂၀၂၀ ဇူလိုင်မှာ ပြီးမယ်လို့ လျာထားပြီး မြို့ပတ်ရထား စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး အဆင့်မြှင့်တင်မူကိုတော့ ၂၀၂၁-၂၀၂၂မှ ပြီးမယ်လို့ လျာထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ပတ် အဆင့်မြှင့်တင်မူ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးပြီးသွားရင်လည်း မြို့ပတ်ရထားလမ်းပိုင်းအချိန်တွေကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲကာ ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
#VOM #voiceofmyanmar #ရန်ကုန် #မြို့ပတ်ရထား #အချိန်ပြောင်းလဲပြေးဆွဲ